﻿ ‘युनिक एकेडेमी सुनसरीकै युनिक विद्यालय हो’
रामधुनी नगरपालिका वडा नं.५ स्थित युनिक एकेडेमीमा कक्षा १२ सम्म अध्ययन हुँदै आइरहेको छ । इटहरीस्थित जनता बहुमुखी क्याम्पसकी प्राध्यापक समेत रहेकी कमला थापा कार्की यस एकेडेमीकी सञ्चालिका हुन् । हामीले यस स्कुलको विशेषता बारे सञ्चालीका थापासँग केही कुराकारी गरेका छौँ । आउनुहोस् हेरौँ न्युजलयका लागि ज्योति पोख्रेलले गरेका कुराकानीः
आजभोलि शिक्षाक्षेत्र र सामाजिक सेवाका क्रियाकलापहरु तथा तालिमहरु संचालन गर्ने कार्यमा व्यस्त रहेको छु ।
के कस्ता सामाजिक संघसंस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ ?
म सामाजिक संस्थाहरुमा आवद्ध छु । जेसिस, लाइन्स क्लब, नेपाल भारत मैत्री संघमा सदस्यको रुपमा कार्यरत छु ।
नेपाल भारत मैत्री संघले के कस्ता कार्यहरु गर्ने गरेका छन् ?
नेपाल भारत मैत्री संघ संस्थाले हाम्रो नेपाल र भारतबीच हरेक क्षेत्रमा सहकार्य गरेको छ । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा शिक्षाको क्षेत्रमा अन्य व्यवसायिक क्षेत्रमा एउटा राम्रो खालको सम्बन्ध राख्ने छिमेकी राष्ट्रसँग गर्ने व्यवहार, विभिन्न राष्ट्रसँग गर्ने एक किसिमको सौहार्दपूर्ण व्यवहार जस्तो मैत्रीपूर्ण व्यवहार भूमिकाहरु निर्वाह गगर्ने काम यस संस्थाले गर्दछ ।
तपाईं गृहणी पनि हुनुहुन्छ, विभिन्न संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ, कसरी आफूले आफूलाई व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
सबैभन्दा ठूलो कुरा इच्छाशक्ति रहेछ । मान्छेले आफ्नो इच्छा शक्ति देखाउन सकियो भने समयलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सकिने रहेछ । यसरी नै समयलाई व्यवस्थापन गरेर गृहिणीको रूपमा पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु । संघसंस्था देखि लिएर अन्य क्षेत्रमा आफ्नो दैनिकी काम काज अगाडि बढाइ राखेको छु ।
तपाईं जनता कलेजमा पनि आवद्ध हुनुहुन्छ ? कहिलेदेखि त्यता जोडिनु भयो ?
विगत आठ वर्षदेखि जनता कलेजमा प्रध्यापक रुपमा अध्यापन गराइरहेको छु । साथै युनिक एकेडेमीमा शिक्षण गरेको त १५÷१६ वर्षनै भैसक्यो । गोल्डेन ब्रिज कलेज छ । त्यहाँ पनि पढाउँछु । यसरी नै दैनिकी चलिरहेको अवस्था छ ।
तपाईंको शैक्षिक क्षेत्रको अवस्थाबारे पनि बताइदिनुहोस् न ?
मैले फाइनान्सबाट मास्टर डिग्रीसम्म अध्ययन गरेको छु । शिक्षा संकायबाट स्नातक सम्म अध्ययन गरेको छु ।
रामधुनी क्षेत्रमा रहेर विभिन्न संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ । यसरी सङ्घसंस्थामा लाग्नको लागि कसरी प्रेरित हुनुभयो ?
सानै उमेरदेखि नै संघसंस्थामा सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने रुचि भएको कारणले पनि मैले समाजको लागि केही गर्नुपर्छ, आफूलाई सामाजिक कार्यहरुमा घुलमिल गराउन सक्नुपर्छ, बिभिन्न संघसंस्थाहरुमा लागेर आफूलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । बच्चै उमेरदेखि सक्रिय रूपमा त्यस तर्फ अग्रसर हुन खोज्थे, वैवाहिक कारणले गर्दा यहाँ आइयो । यहाँ आएर पनि जेसिस, लाइन्स क्लबले गरेका राम्रा गतिबिधिहरु, त्यहाँ बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको जमात देखेपछि आफु पनि सहकार्य गरेर अघि बढ्न सके भने मैले पनि समाजको लागि केही गर्न सक्छु, अन्य समाजमा रहेका व्यक्तिहरूको लागि पनि केही गर्न सकिन्छ, त्यो जमात मेरो लागि स्वीकार्य छ भन्ने कुराहरुले मलाई प्रेरित बनायो ।
तपाइको परिवारको अवस्था कस्तो छ, परिवारमा सबैभन्दा बढी को मार्फत सहयोग प्राप्त गर्नुहुन्छ ?
अहिले भन्नुपर्दा हामी एकल परिवारको रूपमा रहेका छौं । मेरो दुईवटा नानीहरु छन् र श्रीमान, म गरी चारजनाको परिवार छौं । सामाजिक कार्य गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले घरपरिवारको साथ सहयोग आवश्यक हुन्छ । त्यसको लागि मेरो श्रीमानले हरेक क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुहुन्छ । उहाँको सकारात्मक प्रेरणाले मलाई अगाडि बढ्नका लागि हौसला मिलेको छ । घरबाट सहयोग हुन्थेन भने मैले शिक्षाको क्षेत्रमा अन्य सामाजिक क्षेत्रमा यो प्रगति गर्न सक्दिन थिएँ होला । त्यो खालको उहाँले गर्नुपर्ने भूमिकाहरु जुन छ, त्यो सकारात्मक खालका छन् । मलाई जहिल्यै पनि आत्मबल बढाउन, केही गर्नु पर्छ, तिमीमा क्षमता छ भन्ने खालको प्रेरणाले गर्दा पनि म अगाडि बढ्न सफल भएको छु ।
युनिक एकेडेमीलाई तपाईंले कस्तो रुपमा लिनु भएको छ ?
धेरै–धेरै संघर्ष पार गर्दै यो अवस्थामा आइपुगेको युनिक एकेडेमी हो । हामीले विगतका दिनहरु सम्झिँदा साना बच्चाहरु देखि लिएर अहिले सम्मक अवस्था, सुरुमा उच्चशिक्षामा हासिल गर्ने स्थानहरू थिएन, सामान्यरूपमा कक्षा ५ सम्मको अध्ययन, त्यसपछि बढाउँदै ८ देखि १० हुँदै ं१२ सम्म लग्यौं । धेरै मेहनत र प्रयास गरेर हामीले अभिभावकहरूको मन जित्न सफल भयौँ, विद्यार्थीहरुमा त्यस्तो खालको उत्प्रेरणा जगाउन सफल भयौं । जसको कारणले गर्दा रामधुनीको पेरिफेरीमा उहाँहरुले रुचाउनुभएको छ ।
युनिक एकेडेमीमा बच्चाहरु पठाउँदा केही कुराहरु सिक्छन्, ज्ञानहरु पाइन्छ भन्नेखालको अभिभावकहरुमा पनि चेतनाको विकास भएको पाइन्छ । विद्यार्थीहरु पनि युनिक स्कुल जान पाउँदा एकदमै खुशी भएको पाइन्छ । त्यसैले मलाई लाग्छ युनिक एकेडेमीमा मैले पनि शिक्षिकाको भूमिका खेलेको छु । विद्यालय भनेको बच्चाहरूको लागि दोस्रो घरको रुपमा लिइन्छ । त्यसकारण त्यो बच्चाहरुलाई एउटा घरको पनि वातावरण प्रदान गरिरहेको छु । आमाबुबाले दिनुपर्ने मायाममता, गुरुहरूले दिनुपर्ने प्रेरणा पनि दिएर सबै किसिमको भूमिका खेलेर यहाँ समाय जस्तो लाग्छ । म एउटा शिक्षिका मात्र नभएर विद्यार्थीहरूको लागि आमा पनि हो ।
विद्यार्थीहरूको गुरु पनि हो । उहाँलाई हौसला दिने एउटा पात्र पनि हो जस्तो लाग्छ आफूलाई ।
विगतका दिनहरुमा कोरोना संक्रमणले गर्दा निकै विद्यालयहरूमा असर गरेको अवस्था थियो, त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म कसरी विद्यालयलाई व्यवस्थापन गर्नुभएको छ ?
समयभन्दा बलवान् कोहिपनि रहेनछ । कोरोना संक्रमण पनि हामीलाई समयले दिएको चुनौती हो । हामीले कोभीडलाई अवसर र चुनौती दुबै रुपमा सम्झिनुपर्छ । विगतका दिनमा कोभीडले नेपालमा मात्र नभएर विश्वभरि नै एकखालको आक्रान्त फैलायो । शिक्षा क्षेत्रमा अझ विद्यार्थीहरुलाई उनीहरूको पठनपाठन देखि लिएर हरेक गतिविधिमा यसले असर पुर्यायो तर पनि हामीले हाम्रो विद्यार्थीहरुलाई चुनौतीका बाबजुद पनि केही अवसरहरू दिनुपर्छ, अवसरहरूको खोजी गर्नुपर्छ भनेर विद्यार्थीहरुलाई विभिन्न समूहमा विभाजन गरेर पढायौं । कक्षा पिच्छेका अनलाइन क्लासहरु सञ्चालन गर्यौं त्यो पनि निकै प्रभावकारी भयो किनकि त्यो समयमा विद्यार्थियों अनेक गतिविधि अनेक क्रियाकलापमा मन जाने, विभिन्न किसिमका अनैतिक कुराहरु भए, कति विद्यार्थीहरु कोभिडको समयमा कुलतमा फसे त्यो समयमा यस्ता विविध क्रियाकलाप विद्यार्थीहरुमा नहोस भनेर अनलाइन क्लासहरु सञ्चालन गरेर विद्यार्थीहरुलाई व्यस्त बनायौं, तपाईंको कसरी सदुपयोग गर्ने भनेर अनलाइन मार्फत नै विद्यार्थीहरुलाई घरदैलो सम्म सेवा पुग्ने किसिमको क्रियाकलाप र संचालन गर्यौं । अब पुनः दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमण आइरहेको अवस्था छ । समयभन्दा बलवान् अझै पनि छैनौं । समस्या आइसकेपछि भोलिको दिनमा विद्यार्थीहरुको पठनपाठनमा कुनै पनि बाधा नपरोस भनेर त्यो खालको तरिका अपनाएर कसरी उनीहरुलाई पढाइप्रति रुची रही राख्न र निरन्तरता दिइरहन पनि योजनाहरु निर्माण गरेका छौं ।
सामाजिक संघसंस्थाहरुको साथै राजनीतिक क्षेत्रमा यहाँलाई कतिको रुचि छ ?
पछिल्लो समय देशको अवस्था हेर्दा भएको राजनीति उथलपुथलका घटना, कुर्सीको खिचातानी, जुन सरकार आए पनि हामी जहाँको त्यहीँ, जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भनेझै अवस्था छ । त्यसको परिणाम हामी जनताले भोगिरहेका छौँ । सास्ती कार्यकर्ताले भोगी रहनु भएको छ । यो हिसाबले देशमा परिवर्तन ल्याउनको लागि सक्षम व्यक्ति राजनीति क्षेत्रमा आउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । तर मैले त्यसरी राजनीतिमा आफूलाई समाहित बनाउने भन्ने त्यस्तो किसिमको सोच राखेको छैन । भोलिको दिनमा परिवेशले, कथाले मागे छ भने, परिवेश मिलेछ भने त्यतातिर पनि जानको लागि नरोक्ला भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ ।
सरकारले विद्यालय साथै सामाजिक संघसंस्थाहरुको लागि के गर्दिए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ?
सरकारले विद्यालय क्षेत्रलाई अझै भन्ने हो भने हामी निजीक्षेत्रका विद्यालयहरु सञ्चालन गरिरहेको, कलेजहरू सञ्चालन गरिरहेको हिसाबमा निजीक्षेत्रलाई सकारात्मकरुपमा सरकारले हेरेको छैन । निजी क्षेत्रका विद्यालयहरुलाई नाफामुलक संस्था हो भनेर भेदभावपूर्ण तरिकाले हेरी रहेको अवस्था छ, तर वास्तवमै निजी क्षेत्रहरु भन्दा सामुदायिक विद्यालयहरु किन खस्किरहेको अवस्था छ । त्यो खस्केको कारणले गर्दा नै जनताको माग निजी क्षेत्रतर्फ झुकेको हो । सरकारले पनि एकदमै दर्बिलो नीतिहरु ल्याउनुपर्छ । अहिलेको शिक्षामा प्राविधिक शिक्षालाई बढी जोड दिएर त्यहीअनुसारको यदि तिरु बनाएर शैक्षिक गतिविधिहरुलाई अगाडि बढाउनुपर्छ शिक्षा नीतिमा पाठ्यक्रमहरु पनि त्यही अनुसारको बनाउनुपर्छ । अघिमात्र हामीले शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार गर्न सक्छौं जस्तो लाग्छ र सरकारी तहबाटै प्राविधिक शिक्षालाई बढी जोड दिने र निजीक्षेत्रका यसको कलेजहरु छन् त्यसको हकमा पनि सरकारले विभिन्न किसिमका महसुल हरुमा सहजता बनाइदियो भने त्यसका करका कुराहरूमा, लकडाउनको कारणले कति विद्यालयहरु बन्द गर्नुपर्ने, व्यापार व्यवसायको बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ । बाध्यता पनि छ विद्यार्थीलाई पढाएको छैन शुल्क असुली कुरा हुँदैन । अर्कोकुरा बैंक बाट लोन लिएर अर्गनाईजेशन संचालन गरेको छ, स्कूलहरु खुलेको छ, कलेजहरु खोलेको छ । त्यसो हुँदा अब बैंकले लोन पनि मिनाह गर्दैन । करमा छुट छैन यो हिसाबले गर्दा कति व्यवसाय धरासायी अवस्थामा पुगेको, विद्यालयहरू दोधार अवस्थामा पुगेको अवस्था हुँदा सरकारको पनि यसमा ध्यान जावोस भन्ने मेरो चाहना छ ।
विद्यार्थीहरुले युनिक एकेडेमी किन रोज्ने ?
यसको नाममा नै भिन्नता छ । युनिक भन्नेबित्तिकै हामी के चाहन्छौं भने विद्यार्थीको हरेक गतिविधि अलिकति अरु भन्दा फरक होस् । शिक्षाका क्षेत्रमा, विभिन्न किसिमका खेलकुदका क्षेत्रमा, अन्य हरेक क्षेत्रमा अरूभन्दा फरक बनाउनको लागि हामीले नाम पनि युनिक एकेडेमी राखेका हौं । सायद जुरेको पनि होला । त्यो हिसाबले गर्दा विद्यार्थीहरु युनिक एकेडेमीमा आउँदा आफूलाई एकदमै गर्वको महसुस गर्छन् । एकखालको स्वतन्त्र वातावरणमा पर्न पाएको र अर्को विद्यार्थी मैत्री वातावरणमा उनीहरुले शिक्षा आर्जन गर्न पाएको, त्यसैगरी त्यहाँ पढाउने शिक्षकहरू देखि लिएर शिक्षिकाहरुले विद्यार्थीहरुमा गर्ने व्यवहार एकदमै राम्रो अनि स्कुल पनि शान्त वातावरणमा अवस्थित भएको कारणले, र अर्को मुख्य कुरा भनेको युनिक एकेडेमीले धेरै नतिजाको राम्रो छ । रामधुनीको पेरिफेरीमा मात्र नभएर सुनसरीमा एसइइमा हाम्रो युनिक एकेडेमीले ल्याएन सफल नतिजा अत्यन्तै स्तरीय छ । विद्यार्थीहरूको उपलब्धि पनि सन्तोषजनक भएको कारणले पनि युनिक एकेडेमी हुन गएको हो जस्तो मलाई पनि लाग्छ ।
तपाईंको आगामी योजनाहरु के कस्ता रहेका छन् ?
लकडाउनको कारणले बनाइएका योजनाहरु पुरा हुनसक्ला या नसक्ला तर पनि हामी सबैले योजना बनाउन र सपना देख्न छोड्नुहुँदैन । त्यसकारण मैले पनि आगामी दिनमा आफूलाई शैक्षिक क्षेत्र एवं संघ संस्थामा आवद्ध छु । म एउटा बिजनेशको विद्यार्थी भएको कारण पनि व्यवसायिक क्षेत्रमा आफुपनि अगाडि बढ्नुपर्छकी भन्ने योजना बनाएको छु । सायदै समयअनुकुल भइदियो भने सानोतिनो व्यवसाय संचालन गर्ने योजना छ । अहिलेको समयमा महिलाहरु बेरोजगार भएर बस्नुपरेको अवस्था छ । उहाँहरूको लागि मैले पनि महिलाहरूलाई प्रथामिकतामा राखेर केही रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरे भने आफूलाई पनि गर्भको महसुस हुने ठानेर भोलिका दिनमा केही गर्ने योजना छ । मेरै आँखा अगाडी महिलाहरु बेरोजगारी भएर बस्नुपरेको अवस्था हुँदा मैलेपनि महिलाहरुलाई त्यो व्यवसायमा समावेश गराएर केही गर्न सकिन्छ कि, उहाँहरुले पनि सानोतिनो आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो समयलाई तेता व्यस्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने एउटा योजना बनाएको छु ।
अन्त्यमा सम्पूर्णमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
सर्वप्रथम त म सम्पूर्ण धन्यवाद भन्न चाहन्छु । वास्तवमा हामीले हरेक हिसाबले अगाडि बढ्नका लागि इच्छा शक्ति मजबुत हुनुपर्छ । समयलाई त्यहीअनुसारले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । गर्न नसकिने भन्ने कुरा केही पनि रहेनछ आज जतिपनि प्रगति भइरहेको अवस्था छ मान्छेले नै गरेको हो । हामीले आफूलाई आत्मविश्वासको साथ अगाडि बढाउनु पर्छ । कहिल्यै पनि मचाहिँ गर्न सक्दिन होला भन्ने आफूलाई कमजोरी महसुस गर्नुहुँदैन । आत्मविश्वास लिएर जब हामी अगाडि बढ्छौं हरेक कुरामा सफलता पाउँछौं । दुख, मेहनत गर्दैनौं भने, प्रयास नै गर्दैनौ भने सफलता प्राप्ति गर्न सकिँदैन र हामीले निरन्तर लागी परियो भने एक दिनमै दिन सफलता पाइन्छ । त्यसैले हरेक संघसंस्था, व्यवसाय जुन क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ मन बचनले लागिपर्नुहोस् । तपाईंको जीवन सफल रहोस, शुभरहोस् भन्ने चाहन्छु ।